APOKALIPSY 21.1-8 | Fitandremana Ankadifotsy
HAVAOZINA NY ZAVATRA REHETRA
Tany sy lanitra vao (1) fa ny taloha hanjavona tanteraka. Tsy ho hita intsony ny ranornasina izay maneho ny herin'ny ratsy.
Jerosalema vaovao (2-5), ilay tanàna masina. Midina avy any an-danitra, avy amin' Andriamanitra. Tsy isika no manakatra ny lanitra, fa ny lanitra no tonga manova izao tontolo izao, mba ho tonga tempolin' Andriamanitra. Io no toerana hiangonan'ireo rehetra izay nanaiky sy namaly ny antsom-pitiavan'Andriamanitra.
Lova mandrakizay (6-8) ahitana fahamarinana lehibe roa :
Fiainana mandrakizay ho an 'ny mpino manana anarana voasoratra ao anatin'ny Bokin'ny fiainana: fiainana feno fifaliana sy fiadanana miaraka amin' Andriamanitra : tsy misy ranomaso sy fahafatesana, tsy misy fisaonana na fanaintainana ; loharanon'ny ranon'aina maimaimpoana hisotroan'izay mangetaheta. Ny mandrakizay dia efa iainantsika eto sahady amin'ny fahitantsika hatrany ny haben 'ny fitiavan' Andriamanitra tsy manam-petra izay nanaiky ho Tompontsika ka nanangana antsika ho zanany.
Fahafatesana mandrakizay ho an 'ny tsy minc sy ny ratsy fanahy: ireo izay mandà ny fiainam-baovao atolotry ny Tompo azy dia hahazo ny anjara ratsy ao anatin 'ny farihy mirehitra afo sy solifara, miaraka amin'i satana, ao anatin'ny fahoriana lalina sy fijaliana tsy misy fiafaràna.
Fampieritreretana : Mahatoky sy marina fa ho tanteraka ny tenin'I Jesosy, Ilay Alfa sy Omega. Aiza no tianao hiainana mandrakizay? NY safidinao no hamarirra nyfiafaranao. Tsy sitrak' Andriamanitra ny hahavery ny olona. Noho nyfahasoavany syfamindram-pony dia mbola omenyfotoana ianao hiverenena Aminy. Koa mibebàha ary ekeo Jesosy, ho Tompo sy Mpamonjinao !